Wholesale Kunze Kwemotokari Zviteshi uye Matumba 3x6m Nedenga remadziro Tende neGreenhouse | Kukunda
Kunze Kwemotokari Ports Uye Maseru 3x6m Nedenga remadziro
10-29 Zvidimbu 30-49 Zvidimbu > = 50 Zvidimbu
9 129 ＄119 ＄109
Iyi mota canopy yakakosha pakupa mumvuri uye nzvimbo yekuchengetera mota dzako, moped, mabhasikoro kana zvimwe zvinhu zvekunze. Iwe unogona zvakare kuiisa mumashure medu seyakakura, inovheneka zuva kuvharidzira mhuri yako nevashanyi.
2) Chitubu mabhatani pazvibatanidzwa zvekumisikidza nyore uye kutora pasi.
3) Pamusoro pevhavha seams inopisa-yakavharwa, waterproo.
Model Nhamba WS-CS136
Item zita Kunze Kwemotokari Ports uye Mahombekombe 3x6m ine Sidewalls
Chimiro spec. Dia 42 * 1.4 / 38 * 1.0mm simbi machubhu pamwe chena upfu zvemapuranga
13x20ft (3x6m) Dhizaini Yehunyanzvi
Iyo 10'X20 'carport inoratidzira kusagadzikana kwemvura, kupisa kwakavharidzirwa polyethylene kumusoro & iyo 38mm Dhayamita simbi furemu iyo upfu yakavharwa kuona kuchengetedza fomu fomu ngura, peeling, & ngura. Izvi zviri nyore kumisikidza carport yakakwana yekupa mumvuri & kuchengetedza kwemota yako, chikepe, kana zvimwe zvinhu.
Kunyangwe dzakaomesesa mota dzinogona kubatsirwa nedzedu dzakaoma dzimba dzekunze dzemotokari. Iine nyore kuvaka furemu yesimbi uye yakasimba, mvura uye UV kurwisa PE (polyethylene) chifukidziro chezvinhu, iyi carport inopa chengetedzo mutengo unotyisa. Iyo anchor kit yeiyi inorema basa carport inowedzera vimbiso yekuti mota yako inogara yakachengeteka mune yakashata mhando dzemamiriro ekunze. Hapana kunetseka kana ukatyaira rori hombe kana SUV, sezvo ese ari maviri matumba emota anoyera 10 'L x 20' W, yakavakirwa iyo hombe yemotokari. Tine iwe wakafukidzwa kana zvasvika pakuchengetedza mota nekupa chengetedzo izere kubva kune dzakaomarara mamiriro ekunze nemutengo unodhura.
Yasimbiswa Pe zvinhu ndeye Kubvarura-chiratidzo, Isina Mvura uye Anti-UV. Maindasitiri egiredhi Kavhara Jira rekugara kwenguva refu uye kudzivirirwa.
2 inobviswa mativi emadziro ane yakajeka pane dhizaini fafitera, uye hwindo rega rega rine hwindo rekunze kunze iro rinotendera mwenje mukati.
Yakakwira Hunhu, inorema-basa poda yakaputirwa simbi sisitimu.Rust & ngura inodzivirira furemu. Danda rega rega resimbi rine mabhatani ekuti ubatanidze matanda nekuchimbidzika uye kuachengeta. Iwo machena maturu ane akafanorongerwa maburi ekubatanidza tambo ye bungee kuburikidza uye inosimbiswa ne grommets kudzivirira iyo turu kubva pakubvaruka. Tambo dzebungee dziri nyore kupeta nepamaburi uyezve kutenderera matanda esimbi kuti uchengetedze.
Kurongedza runyorwa rweako mareferensi. Kuwedzera, yega yega seti tichaisa yekuunganidza kuraira pabhokisi kuti zvive nyore kwauri.
Pashure: Plastic Tunnel Green House Yekurima 6x3x2m
Zvadaro: Kunze Kunopisa Kutengesa Matende Ezviitiko Party
Mota Garage Shelter Canopy
Car Kupaka pokugara
Imba yekugara Garaji Tende
Kunze Kwemotokari Dzimba
Portable Car Canopy Ne Isina Mvura 10'x2 ...